UPitso ujabule ngokumisa isitimela seBaroka | News24
UPitso ujabule ngokumisa isitimela seBaroka
Cape Town - Umqeqeshi weMamelodi Sundowns uPitso Mosimane uthokozile kulandela ukuthi ezakhe zikwazile ukufaka amagoli amane zibhekene neBaroka FC evutha bhe kulezi zinsuku kowe-Absa Premiership ngoLwesibili.
Ngaphambi kokuba kuqale umdlalo abafana bakaKgoloko Thobejane bebeqhwakele esicongweni seligi ngamaphuzu angu-19 ngemuva kokuqala isizini ka-2017/18 ngegiya eliphezulu.
Nokho iBakgaga ayilibonanga elidlalayo kumaBrazilians njengoba amagoli kaMotjeka Madisha, uPercy Tau noThemba Zwane eqinisekise ukuthi iqembu lihamba namaphuzu amathathu.
UMosimane uncome uThobejane ngebhola afike alidlalisa le kilabhu yaseLimpopo wathi uyakholewa ekutheni amaqembu akwiligi, kanjalo nomphakathi, uhlezi umbukela phansi lo mqeqeshi.
"Kuyabonakala ukuthi umqeqeshi weBaroka, uKgoloko Thobejane, wenza umsebenzi oncomekayo," kusho uMosimane ngemuva komdlalo ekhuluma nabeSuperSport.
"Kwesinye isikhathi simbukela phansi kanti udlalisa ibhola eliyingcwenga."
UMosimane uqhube wathi: "Ngemizuzu engu-15 yokugcina bebeyingozi kakhulu. Badlala kanjalo nangesikhathi bebhekene nePlatinum Stars neCape Town City."
Lo mlolongi weSundowns uthe ukufaka amagoli kuzobuyisa ukuzethemba kubafana bakhe.
"Uma befaka amagoli, kuyabuya ukuzethemba. ISundowns idlala ibhola elihle vele. Ngiyambongela kakhulu uPercy (Tau) ngokufaka amagoli amabili ngoba wenza yonke into kahle bese ehluleka ukubhakuzisa inethi."